5 + 1 dzimwe nzira dzeEvernote dzinokutendera iwe kuti uve unobudirira | IPhone nhau
5 + 1 dzimwe nzira dzeEvernote dzinokutendera iwe kuti uve unobudirira
Kana zvasvika pakutora-kutora maapplication, yekutanga cross-platform app iyo inouya mundangariro ndiEvernote. Neichi chishandiso tinokwanisa kutora zvinyorwa, kuzvigadzirisa, kuwedzera mhando dzese dzemukati uye kuita kuti zviwanikwe pane chero chishandiso chine sisitimu inoshanda. Asi nekuda kwekuti kunyorera kwakanaka kwazvo hazvireve kuti zvichave zvakadaro kune vese vashandisi. Kana paine chero chikonzero iwe usinga farire chikumbiro chekutora manotsi enzou, mune ino chinyorwa tichafungira akati wandei dzimwe nzira dzeEvernote.
Tisati tatanga, ndinoda kutaura kuti inotevera rondedzero kwete maererano nekukoshaKana zvisina kudaro, vauya sei kumusoro wangu? Dzimwe dzedzinotevera nzira kuna Evernote ndidzo dzakanakisa dzandakaedza ini pachangu, vamwe vakazvikurudzira kwandiri uye dzimwe dzinoita senzira dzakanakisa pane webhusaiti inozivikanwa iyo chete chikonzero chekuva nzira dzekutsiva. Chikonzero chaakaisa mumusoro wenyaya "5 + 1 alternatives" uchachiwana paunoona chekutanga.
1 Dzimwe nzira kuEvernote yeIOS
1.1 Manotsi eIOS
1.3 Google Chengeta
1.6 Imwe Dhayari + manotsi
Dzimwe nzira kuEvernote yeIOS
MunaJune 2015, Apple yakatiudza nezve app nyowani Manotsi eIOS iyo yakauya neIOS 9. Kunyangwe chiri chokwadi kuti vashandisi vanonyanya kudzvanya vanogona kutadza, zvakare ichokwadi kuti yakaiswa nekusarudzika muIOS uye inopa akasiyana mikana, senge yekuwedzera zvinyorwa (DOH!), kudhirowa, mifananidzo, mavhidhiyo kana, kubva kuIOS 9.3, mukana wekudzivirira manotsi edu nekodhi kana Kubata ID.
Kune rimwe divi, isu tichavawo nazvo manotsi ese akawiriraniswa neICloud, iyo ichatibvumidza kuti tivabvunze vachishandisa imwe yeakasimba mapoinzi eApple: ecosystem yayo. Pasina kupokana, yekuzvarwa iOS kunyorera ndicho chinhu chekutanga chatinofanira kuedza kana tikatsvaga dzimwe nzira kuEvernote.
Kusvikira kuunzwa kweIOS 9 neayo manyorerwo ekushandisa manotsi, iko kunyorera kwandaimboshandisa kuzadza zvikanganiso zvekushandisa pachayo Notability. Hatigone kutaura kuti chishandiso chisingadhuri, asi chinopa mikana yakawanda, senge kunyora, mhando dzakawanda dzemafonti, mavara akasimbiswa, kupinza / kunyora mumaPDF uye kuwiriranisa neICloud. Chakaipisisa ndechake mutengo we € 7.99 asi, sezvinhu zvese, zvinogona kutaridzika kunge zvinodhura kana tichizotora mukana nazvo.
Mune chero runyorwa rwezvigadzirwa zvekugadzira panofanirwa kuve nechinhu chakagadzirwa neGoogle. Kana isu tikakanganwa kuti tichave tichirasikirwa nehumwe hwakavanzika, yakanaka imwe nzira kune Evernote iri Google Chengeta. Kufanana nesoftware yese yekambani yazvino ine Alphabet, Google Keep ndeyekushandisa kwemahara uye, kana iri pane iyi runyorwa, inotipa mukana wekutora manotsi, kugadzira zvinyorwa, kugovana uye kuzvifananidza mugore. Haisi iyo yekushandisa ine dzimwe sarudzo, asi inogona kutishandira zvakakwana, kunyanya kana gore ratakasarudza iri Google Drive.
Google Chengetedza: zvinyorwa uye zvinyorwavakasununguka
Kana Google ikatipa imwe nzira kune Evernote, Microsoft yaisazove shoma. Musiki weanonyanya kushandiswa hofisi suite papasi anotipa OneNote, chishandiso chinotibvumidza kutora uye kuchengetedza chero chinhu, kuronga zvinyorwa zvedu mugore, kugadzira zvinyorwa zvakagovaniswa uye kuwana iwo manotsi kubva kune chero chishandiso. OneNote zvakare iri application yemahara, chero bedzi isu tichifunga kuti mari ndiyo chete nzira yekubhadhara.
Kana izvo zvatinoda iri minimalist uye nyore kushandisa chishandiso, Simplenote isu tinofarira. Seizvo zita rinoratidzira, Simplenote chirongwa chiri nyore kwazvo chinotarisa pakubata uye nekujeka. Zvinyorwa zvedu zvinowiriraniswa mugore uye zvese zve mutengo we € 0. Inofanira kucherechedzwa kuti ichi chishandiso hachipe akawanda mikana, asi zvakare kuti ndiyo yakanyanya minimalist yatinogona kuwana muApp Store.
Imwe Dhayari + manotsi
Imwe nzira huru kune Evernote ndeye Zuva Rimwe. Kunyangwe isiri yemahara kunyorera kana, panguva yekunyora iyi iri kutengeswa ne mutengo we € 4.99. Sechikumbiro chakabhadharwa icho uye chakafanana nekusagona, Zuva rekutanga rinotipa mikana yakawanda, senge yekuwedzera mapikicha, kugadzira akawanda madhiariari, zviyeuchidzo zvemunhu kana kuvhara nekodhi / Kubata ID.
Zuva Rekutanga Diary + Zvinyorwavakasununguka
Ndeipi yako yaunofarira Evernote imwe nzira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 5 + 1 dzimwe nzira dzeEvernote dzinokutendera iwe kuti uve unobudirira
UPAD yanga isipo (wandinoda)
Runyerekupe: Gore rino iPhone ichadaidzwa kuti iPhone 6SE uye ichaunzwa munaGunyana 16
Iyi ndiyo yekutanga mifananidzo yeiyo 2-inch iPad Pro 12.9?